कथा: पल्ला घरे च्याखुरी
“कति टिभिमा झुन्डिदो रैछ। यसो आफ्नो ओछ्यान मिलाएर बडार कुँडार गरेपनि त काम नै हुन्थ्यो नि।” तरकारि केलाउँदै गरेकि आमाले मलाइ कराउनु भयो।
“जान्दिन म त मिलाउन।” टेलिभिजनमा घोरिएको मैले जवाफ फर्काएँ।
“तँ खै कहिले जान्ने हुन्छस् कोनि! अब त चौध बर्षको भैसकिस्। पल्ला घरकि संगिता घरको सबै काम एक्लै गर्छे। उसकि आमालाइ कति आनन्द भएको छ। तँ भन्दा कान्छि मान्छे ऊ झन्…..।” आमा एकहोरो गुनासो गर्न थाल्नु भयो।
“हुन्छे खुब कान्छि! म भन्दा छ दिन पछि कि त हो नि त्यो च्याखुरि।” मैले आमाका कुरा काट्दै बोलिहालेँ।
“जति दिन भएपनि कान्छि त हो नि। कति काम गर्छे त्यो? तँ एउटा सिन्को भाँच्छस्?” आमा च्याँठ्ठिनु भयो।
“दिनु न सिन्को, भाँचि हाल्छु नि।” मैले आमालाइ गिज्याउँदै बोलेँ। “ला….खा! थेत्तरो हुन्छस्?” आमाले छेउमा भएको कुच्चोले मलाइ झटारो हान्नु भयो।
“आइया!” खासै नदुखे पनि मैले दुखे झैँ गरेँ।
“काकि! ए काकि!” त्यति नै बेला घर बाहिरबाट संगिताको आवाज आयो। म हत्तपत्त सम्हालिएर बस्दै सबै ध्यान टिभिमा नै लगाएको अभिनय गर्न थालेँ।
“ठिक्क आइपुगिछे यो पनि। तेरै कुरा गर्दै थेँ।” आमा केहि सान्त हुंदै संगिता संग बोल्नु भयो।
“के कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि मेरा?” संगिता उत्सुक हुँदै प्रश्न गर्दै भित्रै पसि।
“यो छ नि एउटा लठुवा। एक पैसाको काम गर्ने हैन। अर्हायो भनेपनि उल्टै जवाफ फर्काउँछ। तँ भन्दा जेठो मान्छे, अलिकति त भर हुन्छ नि अब हैन, भन् त?” आमा मलाइ आँखा तर्दै संगितालाइ बेलिबिस्तार लगाउन थाल्नु भयो।
“हो नि काकि। भात नदिनु नि यसलाइ। यत्रो बुढो भैसक्यो।” ऊ मेरो अनुहारमा हेरेर निच्च दाँत देखाउँदै आमालाइ उकास्न थालि।
“खुब भएँ बुढो। तँ चाहिँ भर्खरकि बच्चि होलिस् नि च्याखुरि।” म मुर्मुरिँदै बोलेँ।
“तँ भन्दा त सानै हुँ क्यारे, के त अनि।” ऊ मलाइ गिज्याउँदै बोलि। आमा बाहिर निस्किनु भयो। ऊ थ्याच्च कुर्सिमा बसि।
“बे गर्ने बेला भैसक्यो, खुब हुन्छेस् सानि।” आमा नभएपछि म झनै सुरिलो स्वरमा बोलेँ।
“अँ होला। तेरो पो पहिले बे गर्ने बेला हुन्छ त च्याँसे बाँदर।” ऊ गम्किएर बोलि।
“हेरौंला नि पछि, कसको छिटो हुँदो रहेछ।” मैले दृढ हुँदै बोलेँ।
“तेरो भन्दा पहिले त यत्रा नि गर्दिन च्याँसे।” ऊ टकटकिदैँ बोलि।
“म त तिस बर्ष पुगेपछि मात्र गर्ने हो।” मैले मुख बटार्दै उसलाइ हेरेर बोलेँ।
“म पनि त्यति बेलै गर्छु नि के।” ऊ थोरै लत्रीएको स्वरमा बोलि।
“त्यति बुढि भएपछि तँलाइ कसले बिहे गर्छ च्याखुरि?” म निच्च हाँसेर गिज्याउदै बोलेँ।
“म मात्र बुढि हुन्छु होला नि। तँ त सधैँ जवान होलास्।” उसले मुख फुलाइ।
“छोरा मान्छे र छोरि मान्छे मिल्छ त च्याखुरि?” मैले झनै उसलाइ चिड्याएँ।
“तँ जे सुकै भन् न। तेरो भन्दा पहिले त मर्दा नि बिहे गर्दिन हो म।” उसले नाकका पोरा खुम्च्याउदै बोलि।
“अब तिन चार बर्षमा ठुला बा ले तिस बर्षको केटा संग बिहे गर्दिन्छन् अनि थाहा पाउलिस् च्याखुरि।” म ऊ पटि फर्कदै बोलेँ।
“खुब होला। त्यस्तो बुढो संग बिहे गर्छु होला म।”
“कस्तो संग गर्छेस् त?”
“आफ्नै उमेरका संग गर्छु नि।”
“म संग गर्छेस् त?” मैले सोच्दै नसोचि प्याच्च बोलिहालेँ। बोलेपछि लाजले रातोपिरो भएर मुन्टो झुकाएँ।
“के अरे? फेरि भन् त?” ऊ राति भएर नबुझे झैँ प्रश्न गरि।
“केहि हैन। जा तँ घर। म टिभि हेर्छु। डिस्ट्रब नगर्।” लाजले हडबडाएको मैले उसलाइ नहेरि बोलेँ।
“जान्न के। यहि बस्छु के गर्छस्?” ऊ मलाइ हातले अलिकति हुत्याउँदै बोलि।
“जा भन्दैछु। पिटाइ खालिस् च्याखुरि।” मैले उसको हात बटार्दै धक्का लगाइदिएँ।
“काकि….. याँ हेर्नु न। यो च्याँसे मलाइ पिट्न खोज्छ।” ऊ चिच्याएर कराइ।
“कुकुर बिरालो जस्तो कति झगडा गर्छौ हँ?” आमा बाहिरै बाट कराउनु भयो।
ऊ मलाइ प्याट्ट टाउकोमा हानेर ढोका तिर भागि। अनि ढोका बाहिर पटि उभिएर भित्र हेर्दै निच्च दाँत देखाएर मलाइ गिज्याइ।
“तँ च्याखुरिलाइ पछि तेरो बुढो पोइले ठिक पार्छ।” मैले उसलाइ हेरेर रिसाउँदै बोलेँ।
ऊ केहिबेर सम्म ढोकामै उभिएर केहि नबोलि दाँत देखाउँदै मलाइ गिज्याइ रहि। म उसलाइ वास्ता नगरे झैँ गर्दै टिभि तिर नजर लगाएँ।
“ओए च्याँसे।” केहिबेर पछि ऊ परैबाट बोलि।
“के?” मैले चिँडिदै जवाफ फर्काएँ।
“मैले बे गर्ने केटाको उमेर म भन्दा कति धेरै हुन्छ थाहा छ?” ऊ गजक्क पर्दै बोलि।
“थाहा पाउनु छैन मलाइ।” मैले मुख फुलाउँदै भनेँ।
“म भन्दा मात्र छ दिन जेठो।” ऊ खित्का छोडेर यति बोल्दै ढोकाबाट बाहिर कुदि। म लाजले त्यहीँ खुम्चिएर ढोका तिरै हेरि मात्र रहेँ।
बर्षौँ बिति सकेको छ। ति पुराना दिनहरु सम्झँदा हिजो झैँ लाग्छ तर त्यसपछि पनि चौध बर्ष बिति सकेका छन्। म अठ्ठाइस् बर्षको भएको छु। कोरोना माहामारिले लकडाउनको समय छ। यहि माहामारिले मिलाइदिएको लामो बिदामा काठमान्डौँ छोडेर घर बस्ने मौका मिलेको छ मलाइ केहि महिना देखि।
आज धेरै बर्ष पछि संगिता देखिइ।
“काकि, सन्चै हुनुहुन्छ?” आँगनमा आइ पुग्ने बित्तिकै उसले आमालाइ सोधि। बरन्डामा चामल केलाउदै गरेकि आमाले ऊ तिर नजर उठाउनु भयो। झ्यालबाट सबै देखि रहेको म बाहिर निस्कौँ या ननिस्कौँ अलमलिएँ।
“ए संगिता पो आइछे। कहिले आइस्? तिज सकिएपछि पो आइस् त।” आमाले नाङ्लो राख्दै बोल्नु भयो।
“तिजमा आउन सकिएन काकि। अहिले लकडाउन खुकुलो भएर आएकि।” उसले घरको यताउता नजर घुमाउँदै बोलि।
“ए ल बस्।” आमाले प्लास्टिकको कुर्सि ठेल्दै बोल्नु भयो।
“अनि सन्तोष पनि आएको छ रे?” उसले कुर्सिमा बस्दै सोधिहालि।
“अँ आएको छ त।”
“अनि खै कता गयो त?”
“भित्रै छ नि कहाँ जान्थ्यो। ल्यापटप खोलेर बसेको होला नि। सानो छउन्जेल टिभिमा मात्र झुन्डिथ्यो। अहिले ल्यापटप छोड्दैन। काम गरेको भन्छ, होला नै त।” आमाले चामल चलाउदै बोल्नु भयो।
“अझै पनि काम सघाउन थालेन काकि?” ऊ हाँस्दै बोलि।
“के गर्थ्यो त्यसले। अब त बिहे गरेर बुहारि ल्याइदिए नि मलाइ सजिलो हुन्थ्यो भन्यो कुरै सुन्दैन….. जा जा भित्रै गएर भेट्।” आमा नाङ्लो टक्याटक्याउँदै बोल्नु भयो।
ऊ कुर्सिबाट उठि। म हतारिदैँ सम्हालिएर बसेर ल्यापटप चलाए झैँ गर्न थालेँ।
“ओए च्याँसेँ।” ऊ ढोकैबाट कराइ।
“हँ!” म उसलाइ देखेर धेरै उत्साहित नभए झैँ गर्दै बोलेँ।
“कस्तो बुढो भएछ यो त।” ऊ छेउको कुर्सिमा बस्दै बोलि।
“तँ त बच्चै छेस् नि च्याखुरि।” म उसलाइ हेरेर हाँस्दै बोलेँ।
“तँ त बिहे नै नगरि बुढो भैस् नि त।” ऊ पनि हाँस्दै बोलि।
“मैले त पहिले नै भनेकै हो नि। तिस बर्ष पुगेपछि मात्र बिहे गर्छु भनेर। देखिस् म कति बचनको पक्का छु?” म जिस्किएँ।
“हो हो। खुब बचनको पक्का।” उसले नाकका पोरा खुम्च्याउदै बोलि।
“अनि के त। तँ जस्तो हो र बोलेको पुरा नगर्ने?” मैले उसलाइ चिँड्याउन खोजेँ।
“भयो के। यस्ता हावा कुरा छोड्। अरु सुना।” उसले कुरा मोड्दै बोलि।
“अरु के सुनाउनु र? तँ सुना न। अनि एक्लै आइस्?” म सामन्य हुँदै बोलेँ।
“हैन म र छोरि।”
“अनि प्रशान्त अन्कल आउनु भएन र?” मैले झट्टै सोधिहालेँ। बोल्ने बित्तिकै मलाइ ग्लानि भएर आयो।
प्रशान्त अन्कल यानि संगिताका बुढा। दमक बजारमा नै उनको परिवारको ठुलो ब्यापार थियो। उनि म भन्दा दस एघार बर्ष जेठा होलान्। उनलाइ मेरो साथी प्रबिनले अन्कल भन्ने भएर म पनि अन्कल भन्ने गर्थेँं।
“उहाँ भ्याउनु भएन।” उसले कालो अनुहार बनाएर सानो स्वरमा बोलि।
“ओए! सरी।” मैले उसलाइ हेरेर बिस्तारै बोलेँ।
“के को लागि नि?” उसले थोरै हाँसे झैँ गर्दै बोलि।
“यसै।” मैले जवाफ दिएँ।
“त्यसो भए आइ एम अल्सो सरि।” उसले टाउको झुकाएर बोलि।
“के को लागि नि फेरि?”
“भन् न के च्याखुरि।” मैले कर गरेँ।
“मैले बोलेको पुरा नगरेको मा।” ऊ निहुरिएर नै बोलि।
“छोड् न यार संगिता। सबै बाचा अनि चाहाना पुरा हुँदैनन्। पुरा नहुँदैमा दुखि हुनै पर्छ र? याद त मिठा छन् नि हैन?” म उसलाइ हेरेर हाँस्दै बोलेँ।
“अँ हो। तर तँ मलाइ संगिता चाहिँ नभन् के, तेरो मुखबाट च्याखुरि नै राम्रो सुनिन्छ।” ऊ खित्का छोडेर हाँसि। म उसको सुन्दर हाँसो हेर्दै मुस्कुराएँ।
ट्यागहरू: #gopal#pallaghar ki chyakhuri#story
एमसीसी संशोधन होइन, खारेज गर्नुपर्छ :
तराईमा पनि हुर्कियो रूद्राक्षको विरूवा, व्यवसायीक खेती हुने सम्भावना धेरै